I-LATAM 2020 - Ipulatifomu Yesiguli Yesiyaluyalu Yomhlaba Wonke Nomoya
ILATAM 2020Ipulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-03-24T16:23:55+01:00
Ingqungquthela yesibili ye-LATAM 2 yeziguli zokuphefumula
Imiphumela ye COVID-19 kwenze kube nesidingo sokunika amandla iziguli kanye nabasebenza kwezempilo emhlabeni jikelele.
Ukuphendula le nselelo, iLovexair Foundation, ibambisene neGAAPP, ihlele i-2nd LATAM 2020 Virtual Summit of Respiratory Patients, uchungechunge lwezifundo zamahhala nemihlangano yokufundisana, evulekele umphakathi, ebingo-6, 7 no-8 Disemba 2020. Le mihlangano yaminyaka yonke ihlose ukuhlinzeka ngamathuluzi nemibono emisha yokuthuthukisa ukuqeqeshwa nokuphathwa kwezempilo yokuphefumula kulo mongo omusha. Le mihlangano yenziwa ngeSpanishi futhi ngokokuqala ngqa kwabanjwa izikhathi ezibalulekile ezikhethiwe ngesiPutukezi saseBrazil. Ingqungquthela yesi-2 bekuyithuba lokuhlanganisa amazwi eziguli ezivela emazweni aseLatin America futhi basebenzisane ngamalungelo abo, ukufinyelela ekwelashweni nokunakekelwa okuthuthukisiwe.
Amazwe abamba iqhaza: Argentina - Brazil - Colombia - Chile - Spain - United States of America - Mexico - Panama - Uruguay - Venezuela
Ikhasi eliyisiqalo le-LATAM
Ividiyo ye-LATAM ngesiNgisi (sicela wenze kusebenze imibhalo engezansi kuvidiyo yakho ye-Youtube)